Samarium Cobalt Igwe Ọdụdọ Ihe, China Samarium Cobalt Igwe Ọdụdọ Materials Manufacturers, Suppliers, Factory - QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Ihe ndi ozo Samarium Cobalt
Dị ka akụkụ nke obere ụwa nke ihe ndọta na-adịgide adịgide, njupụta samarium cobalt (SmCo) na-adabakarị n'ezinụlọ abụọ nke ihe. Ha gụnyere obere ụwa Sm1Co5 na Sm2Co17 ma kpọọ ha ihe 1: 5 na 2:17. E nwere usoro nrụpụta atọ dị iche iche: igwe ndọta SmCo sintered, ndọta SmCo jikọtara ya, na ịkpụzi ọgwụ SmCo magnet. SmCo magnet bụ arụmọrụ dị elu, ọnụọgụ okpomọkụ dị ala na-adịgide adịgide nke samarium na cobalt na ihe ndị ọzọ dị obere. Ya nnukwu uru bụ elu na-arụ ọrụ okpomọkụ-300 ogo centigrade. Ọ dị mkpa ka ekpuchi ya n'ihi na ọ na-esiri ike iwepụ na oxidized. SmCo magnet na ọtụtụ-eji moto, nche, transducers, ngwá, positional detector, generator, Rada, wdg
Samarium Cobalt na-ejide akụ ya ọkọlọtọ na ogo kachasị dị elu karịa neodymium, ọ bụ ezie na strengh ya kachasị obere. Ọnụahịa nke ihe SmCo bụ nke kachasị ọnụ, yabụ na-akwado SmCo naanị mgbe arụmọrụ ya bụ gburugburu ebe dị elu dị elu na-akpata nchegbu.
1.SmCo na-adịgide adịgide magnet nwere nnukwu magnetik ike ngwaahịa na elu coercive ike. Njirimara ya dị mma karịa Alnico, ferrite na-adịgide adịgide magnet. Ihe kachasị. ngwaahịa ike ruru 239kJ / m3 (30MGOe), nke bụ ugboro atọ nke nke AlNiCo8 magnet na-adịgide adịgide, ugboro asatọ nke nke magnet na-adịgide adịgide (Y40). Ya mere, magnetik na-adịgide adịgide mere site SmCo ihe onwunwe bụ obere, ìhè na mụ na ihe onwunwe. Ọ na-ebe etinyere electro now & Telecommunication ngwa, electric Motors, ụfọdụ mita, ihe akudoro-elu elekere elekere, ngwa ndakwa nri ngwa, magnetik usoro, ihe mmetụta na ndị ọzọ na static ma ọ bụ ike magnetik ụzọ gasị.
2.The curie temp. nke SmCo na-adịgide adịgide magnet dị elu na ya temp. Coeff. dị ala. N'ihi ya, o kwesịrị ekwesị ka ojiji na 300, elu temp.
3.SmCo na-adịgide adịgide ndọta bụ anụ na bristle. Ike ya siri ike, ike ọdụdọ na ike pịa dị ala. N'ihi ya, ọ bụghị adabara kpuchie.
4.The isi mgwa nke SmCo adịgide magnet bụ metal cobalt (CoY99.95%). N'ihi ya, ọnụahịa ya dị elu.
Njirimara nke Samarium Cobalt Igwe Ọdụdọ
* Nnukwu magnetik nwere ezigbo nkwụsi ike.
* Elu iguzogide elu okpomọkụ, Curie okpomọkụ nke ọtụtụ karịrị 800 ?? * Ezigbo ikike mmebi nke corrosion, enweghị mkpuchi dị mkpa maka nchedo elu.
Njirimara Magnetik nke SmCo
Ogbe 5 Ubochi 2
okpomọkụ Ọnụọgụ of Br (% / Celsius C) -0.05 -0.03
okpomọkụ Ọnụọgụ of igwe (% / Celsius C) -0.3 -0.2
curie okpomọkụ (Celsius C) 700-750 800-850
njupụta (g / cm3) 8.2-8.4 8.3-8.5
Ndị mmeri Ekweghị ekwe (HV) 450-500 500-600
Na-arụ ọrụ okpomọkụ (Celsius CC) 250 350